Wadaagista Snapchat-kaaga ayaa hadda aad uga fudud | Wararka IPhone
Wadaagista Snapchat-kaaga ayaa hadda aad uga fudud
Snapchat ayaa ku dhawaaqay inay soo socdaan horumarin taas oo wax ka badali doonta sida dadka isticmaala ay u adeegsadaan shabakadooda bulshada. Waqtigan xaadirka ah ma naqaanno siyaabaha cusub ee aan ula macaamili karno sawirrada, fiidiyowyada iyo farriimaha ay kuwa raacsan ama saaxiibbadeen noo soo diraan, laakiin tallaabada ugu horreysa ee uu qaado Snapchat ayaa noo oggolaan doonta hel si fudud kuwa raacsan.
Illaa iyo hadda, awood u yeelashada xayeysiinta akoonnadayada 'Snapchat' aad ayay u adkeyd, maadaama aan kaliya ku sameyn karno wadaagista magaca isticmaaleyaasheena, wax u horseedaya dhibaatooyin, gaar ahaan marka loo eego naaneysyo adag. Ikhtiyaar kale oo lagu wadaagi karo magacyada adeegsadeyaashayadu waxay ahayd adeegsiga lambarrada QR. Waa hagaag, tan dhammaantood way is beddeleen tan iyo cusboonaysiintii ugu dambaysay, taas oo ay ku jirtay Snapchat wuxuu bilaabaa inuu bixiyo URL-yada sidoo kale.
Tani waxay ka dhigan tahay inaan nuqulan karno oo ku dhajin karno iskuxiraha astaamaheena, sidaas darteed way fududaan doontaa helitaanka kuwa raacsan cusub. Hada laga bilaabo waxaan kula wadaagi karnaa, shabakadaha kale ee bulshada, urlkeena snapchat adeegsadayaashuna si toos ah ayey u gali karaan astaamaha waxayna bilaabi karaan inay na raacaan. Marka qof gujiyo URL-ka, wuxuu isku dayi doonaa inuu ku furmo Safari kadibna farriin ayaa soo muuqan doonta oo nooga digeysa in barnaamijka Snapchat uu furmayo.
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Snapchat hadda waxaa loogu heli karaa bilaash App Store.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Wadaagista Snapchat-kaaga ayaa hadda aad uga fudud
IPhone 5se wuxuu diyaar u yahay inuu bilaabo soo saarida